Zimbabwe to export electricityMbare Times | Mbare Times
Home Business Zimbabwe to export electricity
Zimbabwe to export electricity. Mutsvangwa said this while officiating at the groundbreaking ceremony for Zambezi Gas and Coal Mining Northern pit in Hwange on Friday where underground mining is set to start.
Information, Publicity and Broadcasting Services Minister Monica Mutsvangwa said Zimbabwe will be able to produce 5 000 megawatts of electricity in five years that will be enough to meet local demand and exports. She said:
… by about 2025 we should be getting 5 000MW of electricity and this will give Zimbabwe what we want and make the country a net exporter. Mutsvangwa called upon the private sector to play a part in helping the Government in attaining Vision 2030.
Makota said the company expects to generate 150MW in the first phase into the national grid in 2024 which will be followed by 600MW by 2027.
Coal Mining Northern pit
Engineer Menard Makota
Previous articlePSL: 6 clubs stall Premier Soccer League restart progress
Next articleBulawayo faces another COVID-19 Lockdown
Industrialists welcome Mthuli Ncube’s 2021 Budget